Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Voatonona ny filoha vaovao sy ny CEO an'ny San Diego Tourism Authority
Julie Coker dia naka ny Helm an'ny San Diego Authority Authority
Julie Coker dia nandray ny toeran'ny filoha vaovao sy ny tale jeneralin'ny Manampahefana misahana ny fizahan-tany San Diego (SDTA) satria ny fikambanana dia manomboka mametraka ny drafitra fanarenana azy ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany eo an-toerana, izay voadona mafy tokoa Covid-19 krizy. Coker, veteranin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny manana traikefa mihoatra ny 30 taona, tonga tany San Diego taorian'ny naha filoham-pirenena sy CEO an'ny birao fivoriambe sy fivahinianana any Philadelphia.
Tamin'ny voalohany, Coker dia tokony hanomboka ny anjara asany vaovao amin'ny SDTA amin'ny volana martsa saingy nanemotra ny daty hanombohany mba hahafahany manampy ny fivoriamben'ny fivoriambe any Philadelphia sy ny mpitsidika ny areti-mandringana. Nandritra io tetezamita io dia natolotr'i Coker ny karamany mba hahafahan'ny mpikambana ao amin'ny ekipa isaky ny ora manohy miasa.
Na eo aza ny fotoan-tsarotra, nilaza i Coker fa faly izy hanampy ny indostrian'ny fizahantany ao San Diego hiverina amin'ny asa aman-draharaha ary hampiorina ny lazany ho iray amin'ireo tanjona faratampon'ny firenena.
"San Diego dia tsy isalasalana fa toerana manokana manolotra mpitsidika traikefa be dia be avy amin'ny torapasika sy ny helodranontsika mankamin'ny faritra manodidina antsika sy ny zava-kanto ananantsika ary ny kolontsainay," hoy i Coker. “Manantena ny hanampy amin'ny fitantarana an'izao tontolo izao ny tantaran'i San Diego aho ary hisarika mpitsidika bebe kokoa sy orinasa maro kokoa handray tombony amin'ny toekarentsika eto an-toerana.”
Ny filohan'ny birao SDTA, Daniel Kuperschmid dia nilaza fa tsara vintana ny fananana Coker hitantana mandritra ireo fotoan-tsarotra ireo.
“Fantatra manerana ny indostria i Julie noho ny fitarihana mavitrika sy tsara. Ny fampifangaroana ny zavatra niainany sy ny toetrany mahavita zavatra dia ho zava-dehibe ho an'ny fikambanana sy ny vondrom-piarahamonina fizahan-tany eo an-toerana rehefa manomboka ny fanarenana isika, "hoy Kuperschmid. "Izy koa dia mitondra fomba fijery vaovao sy fientanam-po amin'ny tanjona izay hanompoana tsara ny SDTA sy San Diego."
Talohan'ny naha filoham-pirenena sy tale jeneralin'ny birao fivoriamben'ny fivoriambe sy mpitsidika tao Philadelphia azy, i Coker dia filoha lefitra mpanatanteraka ao amin'ny fikambanana. Nandany 21 taona niaraka tamin'ny Hyatt Hotels i Coker, toerana nitananany toerana mpitantana ankapobeny ho an'ny fananana any Philadelphia, Chicago ary Oakbrook, Illinois. Anisan'ireo zava-bitany marobe i Coker izay talen'ny American Hotel & Lodging Association's Women in Lodging council, ary mpiara-miasa amin'ny US Travel Association's Meetings mean Business. Ankoatr'izay, izy dia mpikambana ao amin'ny National Society of Minorities in Hospitality ary ao amin'ny Philadelphia Chapter of Links, Incorporated. Izy dia niasa tao amin'ny birao mpanolo-tsaina ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena any Philadelphia, Boy Scouts of America - Cradle to Liberty Council, Sekolin'ny fandraisam-bahiny sy fizahan-tany ao amin'ny University University ary ny distrikan'i Philadelphia Center City. Mpitambola ho an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny Fampirantiana (IAEE) izy. Izy dia miasa amin'ny komity mpanatanteraka ao amin'ny US Travel Association, Destinations International ary ny Greater Philadelphia Chamber of Commerce. Farany, niasa tao amin'ny ekipa tetezamita ny ben'ny Tanànan'i Filoham-pirenena Jim Kenney izay misolo tena ny sehatry ny fizahan-tany.
Amin'ny anjara asany vaovao, Coker dia hitarika ny fitantanana sy ny fampandrosoana stratejika ny SDTA hiantohana ny varotra mahomby, ny varotra ary ny fampiroboroboana ny faritra ho tombontsoan'ny fiaraha-monina San Diego. Izy koa dia ho mpitarika ny vondrom-piarahamonina manan-danja miasa amin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny tanàna sy ny distrika, ireo orinasam-pizahantany fizahan-tany eo an-toerana sy manerantany, ary ny vondron'orinasa mba hiantohana ny fitomboana sy ny fiaharan'ny indostrian'ny fizahantany.
Izy no nisolo an'i Joe Terzi, izay nanambara ny fisotroan-dronony tamin'ny taona 2019 taorian'ny 10 taona niasany. Terzi dia nanohy nitarika ny SDTA nandritra ny tetezamita, niala tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 30 Mey. Hitoetra ho mavitrika amin'ny fiarahamonina eo an-toerana izy, ary hiasa ao amin'ny filankevitry ny Distrikan'ny Marketing any San Diego ary hanohy ny asany amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny Balboa Park.
Egypt: Hiverina tanteraka ny sidina iraisam-pirenena amin'ny 1 Jolay